Abigail—“Nhyira Nka Wo Nyansa”
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
DAWID a ɔtenaa ase tete Israel no na ɔkaa saa asɛm no. Ɔkaa saa de kamfoo ɔbea bi a ohyiaa no. Ná yɛfrɛ ɔbea no Abigail. Dɛn na ɛmaa Dawid kamfoo no, na dɛn na yebetumi asua afi nea Abigail yɛe no mu?
Bere a Dawid reguan afi Ɔhene Saul anim no na ohyiaa ɔbea warefo yi. Ná Abigail kunu Nabal yɛ ɔdefo a ɔwɔ nguan pii. Ná ɔde wɔn kɔ adidi wɔ bepɔw so, baabi a ɛwɔ Yuda anafo fam. Dawid ne ne mmarima no yɛe “sɛ ɔfasu” maa Nabal nguan ne ne nguanhwɛfo no. Akyiri yi, Dawid somaa ne mmerante sɛ wɔnkɔsrɛ Nabal sɛ, aduan a ne “nsa bɛka biara” ɔmma wɔn bi. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Sɛ yɛhwɛ sɛnea na Dawid ne ne mmarima no abɔ Nabal agyapade ho ban a, na Dawid adesrɛ no nyɛ biribi a ɛboro so.
Ná Nabal din ne ne honam sɛ, efisɛ ne din no kyerɛ “Ogyimfo” anaa “Ɔkwasea.” Bere a ɔtee Dawid adesrɛ no, ɔteɛteɛɛm guu Dawid mmarima no so yeyaw wɔn, na wamma wɔn hwee. Enti Dawid siesiee ne ho sɛ ɔrekɔkyerɛ Nabal nyansa. Nabal nkwaseasɛm nti, na ɔne ne fiefo behu amane.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.
Abigail de n’ani too fam hui sɛ, nea Dawid de ahopere abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no de asɛnkɛse bɛba. Enti Abigail de akokoduru yɛɛ ho biribi. Ɔkasa kyerɛɛ Dawid obu so. Ɔsrɛɛ no sɛ ɔnhwɛ na wanyɛ biribi a ɛbɛsɛe ɔne Yehowa ntam. Afei ɔmaa Dawid a na ɔbɛyɛ ɔhene a odi hɔ ne ne mmarima no aduan pii. Dawid nso gye toom sɛ ɛnyɛ Yehowa na ɔsomaa Abigail baa ne nkyɛn a, anka ɔbɛyɛ biribi ama wadi fɔ wɔ Onyankopɔn anim. Dawid ka kyerɛɛ Abigail sɛ: “Nhyira nka wo nyansa, na nhyira nka wo sɛ woayi me afi mogya ho afɔdi mu.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.
Nneɛma pa a Dawid yɛ maa Nabal nyinaa, wankyerɛ ho anisɔ. Sɛ yɛhwɛ nea Nabal yɛe no a, yetumi hu sɛ ɛnsɛ sɛ yesuasua no da. Bio nso, sɛ yehu sɛ ɔhaw bi rebobɔ ba a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nea yebetumi de siw ano. Asɛm a odwontofo no ka kyerɛɛ Onyankopɔn no, yɛn nso yebetumi aka bi. Ɔkae sɛ: ‘Kyerɛkyerɛ me nyansa ne nimdeɛ.’—Dw. 119:66.
Afoforo betumi ahu sɛnea yɛyɛ yɛn ade nyansam no. Sɛ wɔka ho asɛm oo, wɔanka oo, wɔn nso betumi ate nka sɛ Dawid. Ɔkae sɛ: “Nhyira nka wo nyansa.”
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2017
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2017